Gacanta Tuugga: Linux waxay horey u leedahay desktop-keeda Trojan. | Laga soo bilaabo Linux
Gacanta Tuugga: Linux waxay horey u leedahay desktop-keeda Trojan.
Ugu dambeyntiina, waxaan dhihi karnaa waxaan leenahay qayb muhiim ah oo suuq ku filan oo sameeya kuwa sameeya xumaanta si ay noogu fiirsadaan. Kaliya kiiskan maahan mid waxyeello u geysanaya Android, laakiin waa furin loogu talagalay qaybinta Linux ee desktop-ka.
Gacan tuug waa Bangi Bangi oo laga sameeyay Ruushka oo si guul leh loogu tijaabiyay 15 qeybinta oo ay ka mid yihiin Ubuntu, Debian iyo Fedora iyo 8 deegannada desktop (oo ay ku jiraan GNOME iyo KDE oo iska cad) waana lagu dhex dhuuman karaa biraawsar kasta (oo ay ku jiraan Firefox iyo Chrome)
Oo muxuu shar sameeyaa? Bangiga Trojan-ka ayaa lamid ah keylogger loogu talagalay in lagu ogaado qaababka xargaha. Kukiyada xadi, ururi kombiyuutarka iyo xogta dhirta xitaa adoo adeegsanaya HTTPS, kana jooji mashiinnada cudurka qaba inay galaan goobaha bixiya cusboonaysiinta amniga Waxa aan caddayn waa sida ay u maamusho in ay u qaadsiiso dhibbanayaasheeda (waxay ka hadlaan xiriiro iyo sameysasho qabasho, laakiin waddo gaar ah ama u nuglaansho lama sheegin).
Waxaa sidoo kale lagu xusay in khayaanada la iibin karo (sida haddii ay tahay software loogu talagalay isticmaalka maalin kasta) meelaha qaarkood ee dhulka hoostiisa ah ee ah 2000 dollars, qiimo aad u sarreeya marka la barbar dhigo qiimaha lagu bixiyo Windows-ka, laakiin waa macquul marka la fiiriyo sahlanaanta wax u dhimista Windows .
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Gacanta Tuugga: Linux waxay horey u leedahay desktop-keeda Trojan.
Kaliya waxaan aqrinayay wararka meesha laga helayo waxa kaliya ee aniga i abuuray ayaa ahaa dhoola cadeyn.
Anigu ma bixin doono 2,000 oo doolar oo ah khayaanada ugu dambeyntii ay tahay in lagu rakibo adeegsadaha lambarkooda sirta ah si ay u shaqeeyaan
Halkaasna, waxaad ku arki kartaa iyada oo socota markaad ordeyso nidaamka daawadayaasha TOP.
Waa inaan ka taxaddaraa AUR
Ku jawaab cabj
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan Linux ayaa ah in adeegsadayaasheeda ay sida caadiga ah aad uga feejigan yihiin saameynta ay leedahay rakibidda softiweer dibadda ah. Kuwa u adeegsada Linux qaab hiwaayad ama waxay bilaabaan inay wax akhriyaan ama aaminaan inay wax ku dhici karaan iyaga oo aan taxaddar lahayn (sida cabj wax uga sheego AUR).
Waxaan u maleynayaa in runtu ay tahay inay aad noogu fiirsanayaan hadana dhanka kale waa wax aad u adag in lagu sameeyo Linux in qof uu bixiyo 2,000 oo doolar kaliya macluumaad yar, uma maleynayo inay ganacsi badan noqon doonto, laakiin markasta waa inaad iska jirtaa.
Waxaan u maleynayaa haddii aanan sameynin nacasnimada inaan ku dhaco khiyaanooyinka injineernimada bulshada, waxaan rakibay Firewall waxaanan ka taxaddarayaa wixii aan ka soo rakibo AUR / Launchpad ma ahan inaan ka walwalo, sax?
@Diazepan waxay uraysaa sida warqad huruud ah lol ma jecli, xitaa hadaadan haysan firewall ama antivirus (waligey midna kumuu rakibin Linux) iyo nidaamka ogolaanshaha ??? haddii daaqadaha iyo mac-da ay weydiiso mar kasta oo ay wax isku dayaan inay nidaamka galaan oo ay wax badbaadiyaan, maxay u geleysaa linux oo wax yar loo oggol yahay ??? aniga beenta ah uu
Ku jawaab elhui2
Xusuusinku waa huruud kuwa kale, maxaa yeelay sida loogu yaqaan GNU / Linux, illaa aad si fudud ugu qarash gareyso ka rakibidda softiweer baraha internetka ama keydadka asal ahaan shakiga ka jiro, suurtagal ma ahan inay taasi adiga ku saameyn karto, sababtuna waa Si fudud, fayraska "Trojan virus" ma daaran karo mashiinka ilaa aad siiso lambarka sirta ah ee sudo (qosol halkan qosol).
Yaan loo oggolaan in qof caqli iyo caqli lihi ku rakibo barnaamij mucjiso ku samayn doona Linux-kaaga ama kuu ballanqaadaya inuu habeen kaa taajiro, maaddaama isla "la taliyaha iibka" ee Trojan uu leeyahay: "Waxaan soo jeedinayaa adeegsiga emaylka iyo bulshada injineernimada oo ah vector infakshan. » marka @gato, haa, runti waad ku saxantahay faallooyinkaaga.
Taasi waa waxa aan idhi, antivirus-ka kaliya ayaa ah isticmaalaha, waxay kuxirantahay warshada haday fiicantahay iyo inay xuntahay (aayad xD).
Waxaan qiyaasayaa inay tahay mid ka mid ah khiyaanooyinka Ruushka.
Intooda badani xumaan bay isu beddelaan.
Jawab David Gómez
Ha walwelin, inta badan barnaamijyada AUR waxaa kormeera isticmaalayaasha kale, kaliya fiiri barta soo dejinta PKGBUILD.
Hagaag, runtu waxay tahay in Linux ay sii kordheyso suuq badan, iyo 2000 oo doolar dhab ahaantii aad ayey u hooseysaa iyadoo la tixgelinayo in inta badan server-yada adduunka ay yihiin Linux, haddii qof uu marin u helo macluumaadka ku jira, wuxuu sababi karaa dhaawac aad u weyn sida tusaale ahaan aagga bangiyada ... laakiin had iyo jeer hadhow dhaca, bulshada oo dhan waa inay xalliyaan arrintan ... xD
Ma aqaano, laakiin taasi waxay uun iiga uraysaa xD, wali ma fahmin sida ay igu qaadday, ma fahmin, horeyba waan u aqriyay ku dhowaad dhammaan baloogyada ka hadlaya Trojan laakiin waa ma cadeyn sida ay u shaqeyso, daaqad ayaa soo bixi doonta oo ii sheegaysa inaan dhigo eraygaaga sirta ah si aan u xado xogtaada? Miyuu dili doonaa firewalld, miyuu iga tagayaa aniga oo aan isticmaali karin mid ka mid ah tty? , oo sida aan ku akhriyay faallooyinka qoraalka Ingiriisiga ah meeshii lagu daabacay, waxay dhahayeen in ay aad u adag tahay in dadka isticmaala GNU ay ku dhacaan weerarada nuucaan ah, runtu waxay tahay inay leeyihiin dhaqan kale oo ah daalacashada internetka haddii aad ayaa u wici kara taas, kuwa maanka ka maqan kama maqna 😛
Jawaab ku bixi ciise israil perales martinez
Waqtigaan la joogo, waxa laga yaqaan "Trojan" waa inaysan ahayn wax intaa ka sii badan oo aan ka yareyn keylogger leh gadaal dambe.
Hayso iyo xaggee ka heleysaa barnaamijka, sidee u dhaaftaa furaha ereyga, gidaarka, iyo sidee u joojiyaa cusbooneysiinta amniga, ma tirtirtaa ilo.list ama maxaa? qofna ma yiraahdo sida ay u shaqeyso, waa waalan yihiin. Haddii aad sameyso inta ugu yar oo dhan waa inaad ogaataa sida loo jebiyo xididka.
Run. Sidoo kale, waxaan arkay inbadan oo barnaamijyo ah oo u adeegsada SUDO inay awoodaan inay ku rakibaan ku-tiirsanaanta (xitaa Steam wuu adeegsadaa), taasoo ka dhigaysa nidaamka xoogaa nugul sidaa darteed, waxaan doorbidayaa inaan xididka ka isticmaalo sudo.
Haddii ay jebiso xididka oo ay jilciso firida, ka dibna isticmaal BSD. Waqtigaan la joogo, ma aanan arkin nuglaansho ku habboon oo kaa dhigeysa inaad ku kalsoon tahay nidaamkaas.
Sidee fayrasku u saameeyaa Linux, haddii uusan lahayn xididkeenna, sidee ayuu u saameyn karaa kernel iyo daemons-ka kala duwan ee adeegyada had iyo jeer nidaamka ku shaqeeya ... Waqti baan la qaatay Linux weligeyna dhibaato kuma qabin dareenkaas. Waxa ugu badan ee dhici kara waa inay ku saameyso nidaamka laftiisa qaabeynta qaar ...
waad saxan tahay isticmaaluhu waa daciifnimada ugu weyn ee ma ahan oo keliya Linux laakiin waa nidaam kasta oo qalliin.
Haddii kale, arag in kudhowaad 5 sano kahor aan si jaahilnimo ah ugu fuliyay amarkan gudaha / guriga iyo /:
dd haddii = / dev / eber ee = / dev / hdd bs = 8192
Waad qiyaasi kartaa waxa xigay ee dhacay.
Hadana haddii aadan siin xididka ereyga sirta ah, si kastaba ha noqotee, waxay abuuri doontaa baaskiil si aan ugu sii wadno howlaha xasaasiga ah sida daemons.
xbd aqoon sida wax loo barto dijo
mmmm laakiin fayrasyadu mar hore ayey u soo muuqdeen linux, laakiin trojans ma i dareemin.
puff Ma xasuusto sanadkii ay ahayd 2009-2012 Ma xasuusto sanadkii ay ahayd, in 50 fayras loo sii daayay Linux waxayna qaadatay ilaa 7 bilood in la xaliyo oo la rakibo dhamaan balastarka lagama maarmaanka ah.
Maanta 2013 waxaan ku arkaa wax cusub mahadhada ka timid Linux, waxaan ku dhowaaday inaan u maleeyo in Linux uusan burburin karin.
PS: Waxay noqon laheyd oṕcion inaad wax yar kahadasho BSD BILAASH si aad u aragto fikrada khubarada.
Jawaab xbd ogaada baro
Hadaad lawareegtay midaas. Ma jirin fayrasyo ​​loogu talagalay Linux sanadahaas. Waxaanan ka shakisanahay in ka badan 10 la sameeyay taariikhda oo dhan. Intaa waxaa dheer, halkan waxaan ka hadleynaa Trojans, barnaamijyadeeda ma laha kakanaansho badan mana ku xirna nidaamka cilladaha, waa hal codsi oo dheeri ah oo leh shaqooyin uusan isticmaaluhu ka warqabin.
Taas waan kugu raacsanahay.
Saaxiib, nidaamyada Posix ma taageeraan fayrasyada. Fayras, qeexitaan ahaan, waa IS-ISTAGA, taasna waa mid ka baxsan macnaha nidaamka posix.
Kharibaadda waxaad rabto oo dhan, maxaa yeelay halkaas waxay kuxirantahay jahwareerka iyo nacasnimada adeegsadaha.
+1 nin, noocyada noocan ah ee qoraalladu waa wax aan ka badnayn tabloid markay ugu fiican yihiin.
50 Fayrasyada Linux oo 7 bilood ayey ku qaadatay in la xoqo? LOL!
Ma hubtaa inaad isticmaasho Linux ama Windows?
Noloshayda waxaan maqlay fayrasyo ​​Linux ah waxaanan rajaynayaa inaanan maqlin 😀
Haddii khayaanadaasi u baahan tahay in SUDO ay soo gasho, markaa waan nabad qabaa [Waayahay, maya].
Hagaag, waxaan rajeynayaa in dhamaan waxyaabaha la yaqaan ay ka dhigi doonaan dib u eegisyadooda si ay u sii daayaan cusbooneysiintooda sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan ugana fogaadaan helitaanka ka faa'iideysiga.
Waan ku maadeystay warkan markii aan ku arkay jaldiga, xaqiiqda fudud ee bilo ka hor aan ku tijaabinayay antivirus-ka clamtk. Markii aan sameynayay baaritaan ku celis ah galka .mozilla, layaabkeygu wuxuu ahaa in biraawsarkeyga uu ku dhacay malware nooca "phising" iyo wax laxiriira "bank".
Sababtaas awgeed, aqrinta warkan waxay igu noqotay wax lagu qoslo, sababtaas darteed waxaan kugu martiqaadayaa inaad kooxdaada u falanqeyso xiisaha.
Ku jawaab ka0s
Phishing guud ahaan sidan uma shaqeeyo, maadaama ujeeddadeeda ugu weyni tahay in dhibbanaha la siiyo macluumaadka la doonayo laftiisa. Natiijada uu clamtk kuu tuuray waxay noqon kartaa maxaa yeelay dabeecadahaaga waxaa jiray qaar ka mid ah koodhka qoraalka ee phishing qaarkood ee ka socda internetka, kuwaas oo badan, laakiin la dagaallanka sharkan waa mid aad u fudud, mar kasta oo aad gasho boggaaga bangiga ama qaar ka mid ah adeegga gaarka loo leeyahay, nadiifi ku meelgaarkaaga iyo dhibaatada la xaliyay.
Qalabka sida HTTPS Meelkasta, WOT iyo NoScript waxay ka dhigayaan nidaamkaaga mid aad uga badbaada nooca noocan ah, wax kale oo caawiya wax badanna waa si fudud in loo xaqiijiyo in cinwaanada bogagga internetka ee aad booqatay ka hor inta aanad macluumaad bixin.
Qalabka ugu macquulsan ee kiisaskaani waa in lagu soo galo bogag internet oo aan la garaneynin oo ku jira qaab qarsoon (qarsoodi ah Chrome, tab gaar ah Opera iyo Firefox / Iceweasel). Taasi waxay u shaqeysay walaalkay waligoodna kama dhicin mar labaad.
Hagaag haa, habka Incognito wuxuu ahaa aalad aad u fiican marka laga hadlayo amniga arrintan.
Waxay ogaadeen waxa ku dhacay lavabit.com, gal goobta oo arag. Waxaan u aaday inaan aqristo farriinteyda, iyo chann… Ma waxaa u sabab ah kiiska Edward Snowden?
Lavabit wuu xiraa, adeegga boostada ee uu adeegsado Snowden
Haa, halkan waa beddel la bixiyaa laakiin kaas oo bixiya mid isku mid ah oo saldhiggiisu yahay Switzerland
Ikhtiyaar wanaagsan, in kastoo nasiibkeyga xun (halkii, dookhayga xun), in kabadan 8 sano kahor waxaan huray asturtayda.
Dale it dijo
Tani waxay heleysaa buun-buunin badan oo ku saabsan tan waana uun riwaayad kaa nixin, sida kuwa kale. Farqiga ayaa ah in kan uu doonayo inuu ku dhaawaco.
Midka aan helin waa inuu aamminsan yahay in barnaamijyada ay iyagu is abuuraan.
Ku jawaab dalecalo
Had iyo jeer waxaa jiri doona qof rakibaya wax aan aqoon tixraackiisa.
Hadda AUR, Launchpad iyo wixii la mid ah, si fiican, had iyo jeer waa inaad taxaddar yeelataa (waana fududahay in la ogaado in xirmada AUR laguu rakibayo adiga), sidoo kale run ahaantii Mozilla iyo dadka Chromium waxay xiraan godka amniga waqti aan fogeyn. , gaar ahaan tan labaad, bixinta Google $ 2.000 waa isbeddel yar oo XD ah
Iyaga waa ku haboon tahay in la maalgashado US $ 2000 siinta iyada oo la siiyo kan ugu horreeya ee ka hela cidhibta Achilles ee biraawsarkooda (Chromium / Chrome) iyo dhacdo ahaan, GNU / Linux kernel.
Waxaan u maleynayaa inay adag tahay in maalin uun aan arki doono Linux oo ka buuxa malware sida Windows, laakiin barafka ayaa bilaabay inuu ordo ... in kasta oo uu yara gaabinayo.
Waa inaan marwalba taxaddarnaa markaan adeegsanno qalabkeenna, dhib malahan haddii aan haysanno Linux, Windows, OSX, iwm.
Sida iska cad, maadaama lagu ilaaliyo rukhsadaha isticmaalaha, runtuna waa inay iska caadi tahay in la dhigo iskudaygan fayraska ee fashilmay.
Intaas waxaa sii dheer, kernel-ka Linux waa jaangooyo tayo marka la barbardhigo kernel BSD ah.
Waxaan kaliya codsi u diray Linus Torvalds oo ka socda Google+ hadii uu wax ka sixi karo u nuglaanta ku jirta Linux kernel-ka cusub ee 3.11 si aan u arko hadii uu awoodo si aan u noolaano ayada oo aan gacanta tuuggu si dhow noogu daba socon 🙂
Uguyaraan Linus waa inuu qoslayaa isagoo faallooyinkaas bixinaya 😀
Ma aqaano haddii kani yahay fayraskii ugu horreeyay ee runtii shaqeynaya Linux ama waa khayaanada internetka ee ugu qancin badan ee la abuuray sannadihii la soo dhaafay.
Waxaan ku doodayaa inay tahay khiyaano, mid aad u fog xaqiiqda.
Taasi waa inay noqotaa. Eeg haddii ay ogaan karaan.
Malware-ka nidaamyada ku saleysan UNIX waxay soo jireen muddo dheer. Ha noqoto dibedda, rootkits ama keyloggers. Laakiin mid ayaa guud ahaan ku dhejiya iyaga ka dib markii uu waxyeelleeyo nidaamka.
Ku jawaab [750mhz]
Waa hagaag, sida ay yiraahdaan, qaybta ugu liidata ee amniga nidaamka qalliinka waa isticmaale.
Sida laga soo xigtay Angel Le Blanc.
pucha, waxay iga tagaysaa fekerka waxaana laga yaabaa in waqtiyada xun ay yimaadaan
Ha walwelin, GNU / Linux, fayrasyadu ficil ahaan uma shaqeeyaan sababo la xiriira nidaamka oggolaanshaha ee nidaamka ku jira.
Khasaarooyinka GNU / Linux?
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in wax waliba ay ku xiran yihiin isticmaalaha iyo taxaddarka ay leeyihiin, haddii qofku feejignaado looma baahna in laga walwalo
Ku jawaab frann
Sida loo rakibo Nuqul sidii barnaamij kale oo ku saabsan Linux
DLinux: Mawduuca loogu talagalay KDM iyo KSplash